Agartuu Qeerroo – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAgartuu Qeerroo
Uummanni Oromoo gaddaaf gadadoo waggoota 26 dabarsee olitti, gidiraa ulfaataan bara bulchiinsa Lammaa Magarsaa ammaa kana hedduuulfaataaf kan baroota darbeeyyuu nii caalaa. “Guyyaan kan abbaa jabaa, halkan kan abbaa lafaa tuun akka kotteen fuutetti jedhe Waraabessi fiigicha jalqabee
Uummanni Oromoo gaddaaf gadadoo waggoota 26 dabarsee olitti, gidiraa ulfaataan bara bulchiinsa Lammaa Magarsaa ammaa kana hedduu caalaa dhufeera. Miliyoonaa walakkaan Uummanni takkaatti buqqaafamuun bara bulchiinsa ammaa kana argame. Haalli jireenya uummata Oromoo gara furmaataarraa deemuurra, qoqoobbii halaagaaf ykn TPLF ittuu hammaate. Shiraaf shiminni qabsoo, akkasuma basaasummaan Wayyaaneef dalaganii wayyaanee utubuun bara ammaa kun kaleessarra caala. Uummata Oromoo gidduutti jibbiinsa facaasuuf waan tokkummaa uummataa nyaatu, waan dhaloota haaraa gidduutti falmiif qoqqooddaa fidu jechoota dhaanquun illee bara bulchiinsa ammaa haalaan hidda fageeffate. Diinummaan diinaa haalan baragee haa mul’atus malee qabsoon Oromoo qabsoon Bilisummaaf abbaa biyyummaas akkanumaan jabaateera. Qabsaa’ooonni hanga wal guddifataa adeeman Wayyaaneen basaasaa bitachuunis amma caala.
Haalota siqiqii ulfaattuu kana keessatti qabsoo uummanni keenya taasisu finiinaa jira, dhaabbachuus hinqabu. Ajjeechaan jumulaan kan akka malee gobbatee adeemsifamaa jirus ka duriirra amma caala. Keessattuu naatoo dhala namaaf akka hinqabne mul’isaa kan jiran gartuun saamtota Wayyaanee, uummata nagaan waaqasaa kadhachuuf bahe irratti dhukaasuun ajjeesuu itti fufee haala addaan adeemsisamaa jira. Galma waaqeffanna garaagaraatti dhukaasaan uummata nagaa ajjeesuun bara bulchiinsa ammaa jabaatuun bineensummaa halagaaf diinummaa OPDO nii saaxile. OPDO’n kaleessas har’as uummata Oromoof haaromuurra uummata Oromoorratti haarofti. Nuu qaramuurra nutti qaramaa bulti.
Uummata Waldiyaa irratti, dhukaasa banuun guyyaa dheengaddaa balaa dhaqqabsiiseen wayyaaneen lubbuu nama 20 ol galaafatan. Ilma namaaf Lubbuu dhala namaaf takkaa naasuuf aantummaa dhabuun waraabummaa isaanii mul’isaa jira. Akkasuma duuti guyyaa guyyaatti uummata keenyarra adeemaa jira. Ilmaan Oromoo nagaa mana barnootaatti ajjeesuun ittuma fufe. Kun ammoo adeemsa isaaf kaayyoosaa haqaati. Kaayyoon mootummaa Wayyaanee addatti kaayyoon TPLF uummata biyyattii mara daguuganii bargaanfatanii jiraachuu kan hawwan ta’uu wal nama hinfalmisiisu.
Haalli OPDO ammaas ta’ee gooftaashee TPLF ammaa kan uummataaf balaa malee waan uummataaf oolu yoomiyyuu qabatanii kan jiran miti.
Yeroo kamuu diinni ofii waan gaariif waan fayyadu ajandaa uummataaf oolu qabatee kan hindhufne ta’uun beekaamadha. Hanga ammaattis kan agartuun Qeerroo argaa jiru waan uummata isaa fayyadu takkumaa Diinaaf qaama diinaarraa kan argaa jiru akka hintaane himuu feena. Ajandaan wayyaanee ajandaa dhabama Oromoof uummata cunqurfamoo akkasuma dhabama qabsaa’otaa akka qabatee dhufaa tureef jiru beekamaadha. Ammas taanan ajandaa nu fayyadu Wayyaaneef jaarmiyaa Wayyaanee OPDO irraa eeguun gowwummaadha. OPDO’n akka jaarmiyaatti qaama Wayyaanee tajaajiluuf tajaajilaa jiru yoo ta’u, ammas utubaa sibiilaa taatee Wayyaanee tajaajiluun ala akka jaarmiyaatti kan uummataaf hinojjenne ta’uu haallan isheen irra jirtu martuu ragaadha.
Wayyaaneen Tibba darbe akka mana hidhaa maakalaawwii cuftu dubbatte. Maakalaawwii cufuu dursitee garuu; mana hiraarsaa bifa addaan dalagamee akka xumurame keessa beektonni himan. Akkasuma hidhamtoota siyyaasaa mara akka hiikuu qabdu karaa miidiyaa lallabde, sunis gaafa oduu ittiin of dhaadeessuuf ittiin simatamuuf dubbatuun ala hanga ammaa hidhamtoota siyyaasaa nan hiika jette keessa kurnootaan kan lakkaa’aman qofa gadlakkifte. Kanarrattuu ergasiis ammayyuu jumulaan hidhuuf hiraarsuu dachaa dachaan hiitee bakka buusuu ittuu fuftee adeemaa jirti. Doorsisa uummataaf saamicha uummataas ittuu fuulleffattee dalagaa jirti. Kaleessaas nu ajjeesaa, nu gidirsaa kan turte ammas ittuu gidiraaf gadadoo uummata keenya Oromootti jabeessitee jirti.
Wayyaaneen akkasuma jaarmiyaanshee OPDO’n diinummaa kan haaronfataa jiran, malee haaroomsa nagaa haaromsa uummataaf bu’aa buusu kaleessaas haaraa’anii hinbeekan ammas akkasuma. Gowwomsaaf afaan dhadhaa dibatanii uummataarraa cookuun alatti uummata Oromoo waan fayyadaa jirtu humaatuu hinqabdu.
Dhugumatti kan dubbannu taanan balaan uummata Oromoorra dhaqqabaa jiru ka duraa olitti fuulleeffatee ittuu hammaataa dhufe malee wanti laaffate humaatu hinjiru. Miidiyaa qabatanii gurra uummataa duuchuun afaaniin uummata mirqaansuu irratti shoorri OPDO’n bahataa jirtu kan Wayyaanee jabeessaa jiru malee Wayyaanee laaffisaa jiru Miti.
“Duuti namaa kana booda Oromiyaa keessaas ta’ee biyyattii keessaa kana booda nii dhaabbata, hidhaan nii dhaabbata” erga jedhame ittuu duuti hammaate. Ittuu hidhaan danbalee adeemuutti jira. Dubbii kana erga Obbo Lammaa Magarsaafaan dubbataniillee duutiif saamichi ittuu jabaatee akka adeemaa jiru argaa Qeerroo jalaa dhokataa miti. Haa ta’uu malee afaaniin uummata Oromoo sobuun akkuma kaleessaan olitti fuulleffatee kan adeemaa jiru, utuu qe’eef qabeenyaasaa irraa uummanni buqqaa’aa jiru, utuu ajjeechaaf godaansi, reebichi nurraa dhaabbatee hinjiraatiin akka daangaa godhateetti of dhaadessuun murna gartuu OPDO diinummaasaanii duraa kan gadjabeessaa jiru ta’uu hubatamaadha. Utuu maatiin keenya bosooma ta’uu qalanii nyaatanii dhiichisuun utuu beekuus utuu hinbeekinis qaamni yeroo rakkoo kanatti gammachuu garaagaraa ibsatu diinummaadha.
Akkuma mata duree agartuu Qeerroo har’aan “Guyyaan kan abbaa jabaa, halkan kan abbaa lafaa tuun akka kotteen fuutetti jedhe Waraabessi” jenne, OPDO’n gocha farrummaa dalagaa jirtuun abbaan jabaate kan falmatee irra aanu ta’uu baannan, galgalli uummata Oromoof saboota cunqurfamoo ammas taanan du’aaf ajjeechaaf hidhaa ta’uu wantoota hedduun raageessuurratti argamu.
Murni bitamtuu OPDO fi Wayyaaneen qabsaa’ota haqaa mara mana hiraarsaa baasuu dhiisuu cinatti, qorannoo jabaan akka Qeerroo irratti taasifamuuf gooftoliinshee dirqama fudhatanii yoo bobbaafaman illee harka rukutuun ala furmaata waan laachuuf yaalte kan hintaane ta’uun ifaadha. Akkasuma dargaggoota caasaa ABO ta’aniif jaarmiyaa ABO Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan onneeffatee kaayyoo abbootasaa kaleessaa, falma abbaa biyyummaa gadjabeessee jiru sakattaa’uun deggarsa Wayyaaneef gochaa kan turteef gartuuwwaan kunneen basaasummaan Wayyaanee tajaajilaa kan turaniif ammallee basaasummaan tajaajiluu kan itti fufan ta’uu agartuun Qeerroo argaa dhagaa’aa jira.
Akka agartuun Qeerroo mirkaneeffatuttis, gochaa hammeenyaa kaleessaa halagaan nurratti geessisaan nu dagachiisuun akka warra gumaa faana hariiroo uumnu dalaguu irratti bobbaan OPDO alaaf keessaa ammaa nii agarsiisa. Har’a gocha Aanoleef Calanqoo kan nu dagachiisuuf deeman ilmaan garaaf bultootaa kunneen, bor ammoo gocha gara jabinaa Mootummaa wayyaanee akkasuma gocha hameenyaa gartuun TPLF nurratti fudhataa tureef jiru nu dagsiisuuf akka deeman hinshakkamu.
Kanas ta’e sana murnoota diinaaf murnoota gantuuf, jala sararee agartuun Qeerroo kan dhaamuu, Sochiif warraaqsa jabaa finiinaa jiru FXG hanga galiin geenyee abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneeffannutti sochiin wal unataaf fincilli walitti fufiinsaa haalaan jabaatee jiru akka jabaatee itti fufu akkasuma dhommoqa mootummaa wayyaanee ammaatti xumura akka gochuuf jiru jala mure dhaamaaf.
Duuchaatti gartuun bitamtuu halagaa bu’aawwan bubuutuuf bu’aawwan garaacha ittiin guddifattu argattuuf diinummaa uummata Oromoo irratti dalagaa jiran kamuu kaleessas milkii gonfatan kan hinqabne, har’as milkii qabsoo uummata Oromoo balleessuun argatan kan hinqabne ta’uu himuu feena. Shira halagaa faana qaamonni Oromoodha ofiin jedhan dalagaa jiran, kan seenaan gaafatu ta’uu gamanumaan dhaamna. Shiroota hammeenyaa qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti xaxamaa jiran, yeroo kamuu quncisnee uummataaf nii dhiyeessina.
Qalbeessaa Dhangi’aan ture